Dhaloonni: Qara Tole Qarriffaa Diinaan Hin Doomu! – Kichuu
HomeOdaa PostDhaloonni: Qara Tole Qarriffaa Diinaan Hin Doomu!
Dhaloonni: Qara Tole Qarriffaa Diinaan Hin Doomu!
#Dhaloonni Qara Tole Qarriffaa Diinaan Hin Doomu!
Waaqooo Nooleetiin 29, 04, 2021
Dhaloonni Ijaa fi Gurra qabu waan itti himan qalbiin barata malee, waan itti himimsaniin hin babarratu;waan isaaf ta’uuf hin taane tolchee beeka waan ta’eef. Kan muran hin dhiigne, kan kaayyeffatee hin fiigne raatuu qalbii raatuu hoffaa qilleensi raasu duwwaa dha. Hoffaan Hoffaadhuma! Muka hoffaa fi murna hoffaa qaamni itti amanee waliin socho’u yoo jiraate inninuu Hoffaa hoffaa caalu Hofoffee Ulee Qobbooti!
Ethiopia baanamtu tana keessatti,
– Sirni kufe
Kan kufee hin banne bara baraan dhalootaaf kuusaa, kuufamaa jiraatu ummata bal’aa seenaa kuusuu fi Seenaa ummataan kuufamuu dha. Waan, ta’eef dhaloonni hadhaa kun dhaloota qabsicharraa qoolleffatee Seenaa kuffisuu miti, dhaloota qabsotti cichuun Seenaa dhalootaaf kuusu ta’aan dhaamsa kooti.
Xumurarratti, Filannoon amma baanamu filannoo dhawaa fi dharaan guutame warra amma filanna jedhee mirqaanuuf filannoo Kaardii filmaataa qofa irratti maqaa guutan, kan bor dhaloonni galmee Gurraacharratti isin guutuu dha.
Kanaaf, guutuu dhalattanii hir’uu hin du’inaa, Harree taatanii haramtanii hin gataminaa Rabbi isin haa baraaruu dafaa salphina seenaan du’uu irraa of baraaraa.
Nageessoo Duulaa Booree Baafadhu Oromo/Oromiyaa Music 2021 (Official Music Video)
Lolli Ethio~Tigraayi gidduu jabaatee itti fufee jira.Waraanni Tigraayi torbee kana kaambii Waraana Naannoo Amaaraa jiru seenuun Qaamolee nageenyaa Mootummaa fi Rayyaa ittisa biyyaa dabalatee hedduu akka ajjeese dubbi himaan Naannoo Amaaraa dubbatee jira. Erga lolli Ethio~Tigraayi jalqabee Konkolaataaleen Ethiopian qabdu lakkoofsan hedduu ta’an Taankii Waraanaa dabalatee Naannoo Tigraayitti barbada’aniiru. Midiyaaleen adduunyaa gurguddoon dubbii kana ijoo oduu taasifatanii gabaasa jiru. Waaranni Raayyaa ittisa Itiyoophiyaa naannooTigraayi keessa socha’uu eeyyama shaabiyaa akka gaafataa jiru illee gabaafamaa jira!
Biyyii tokko biyya ta’uuf biyya biroo balleessuu qabdi !!!!! Nami tokkos nama ta’uuf ykn bekamuuf beeka isaa caalu balleessuun dirqama isaati knf nattii fakkata dr ……!!!!!????
Ga MMa Chuu
Congratulations Ob Lidetu!!